किन पूर्व र दक्षिणतर्फ नै सिरानी बनाइन्छ ? - Kendrabindu Nepal Online News
किन पूर्व र दक्षिणतर्फ नै सिरानी बनाइन्छ ?
१८ भाद्र २०७६, बुधबार १५:२९
शास्त्रले भन्छ :
अर्थात् पूर्वतर्फ सिरानी बनाएर सुत्दा विद्या बढ्छ, उत्तर सिरान बनाउँदा हानि वा मृत्युसमान कष्ट हुन्छ, पश्चिमतर्फ सिरान बनाउँदा अत्यधिक चिन्ता हुन्छ भने दक्षिण सिरानी बनाएर सुत्दा धन र आयु वृद्धि हुन्छ ।
शास्त्रले यसो भने पनि अहिले धेरैलाई यस्ता कुरा बेकार लाग्छन् । उनीहरू यसलाई अर्थहीन बकवास ठान्छन् । यद्यपि हाम्रा पितापुर्खाले भन्दै र अनुशरण गर्दै आए, ओछ्यान बनाउँदा सदैव पूर्व वा दक्षिण दिशातर्फ नै सिरानी बनाएर सुते ।
दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व जता सिरान बनाए पनि के हुन्छ र ? कसैलाई मतलब भएन । किनभने अहिलेकालाई लाग्यो यी कुरा अन्धविश्वास हुन्, पुरातन रुढी हुन्, तुक नभएका धारणा हुन् । यस्तै मानसिकता कारण अहिलेका पुस्ताले सुत्नका लागि कसरी र कस्तो अवस्था अपनाउने भन्ने कुराको पालना गरेनन् । तापनि बूढापाकाले भन्न छाडेनन्– सिरानी जहिल्यै पूर्व वा दक्षिणतर्फ नै बनाउनुपर्छ ।
आज यही विषयमा चर्चा गर्न र यसको वैज्ञानिक पक्ष केलाउन खोजिएको छ । खासमा राम्रो स्वास्थ्यका लागि पौष्टिक आहार, योग ध्यानका साथसाथै नियमित दिनचर्या पनि जरुरी छ । दिनचर्यामा सही समयमा उठ्ने र सुत्ने तालिका तथा राम्रो निद्रा पनि पर्छ । अतः अनुभवहरूको सारका रूपमा आएका शास्त्रलाई अपनाउँदा हानि हुने देखिँदैन ।
हाम्रा हरेक धार्मिक मान्यता एवं शास्त्रीय कुरामा वैज्ञानिक अर्थ एवं रहस्य पनि लुकेजस्तै सुताइको सवालमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । अर्थात् सिरानी कुन दिशामा लगाउने वा कता टाउको फर्काएर सुत्ने भन्ने कुरामा पनि वैज्ञानिक कारण छ ।
पृथ्वीमा चुम्बकीय तत्व हुन्छ । यसमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ लगातार चुम्बकीय तरंग प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । जब हामी दक्षिणतर्फ शिर अर्थात् टाउको राखेर सुत्छौं, तब यी ऊर्जा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छन् र खुट्टाबाट निस्किएर बाहिर जान्छन् । यही कारण बिहान उठ्दा मानिसले ताजगी महसुस गर्छन् ।
तर, उत्तरतर्फ टाउको फर्काएर सुत्यौँ भने हाम्रो शरीरमा विपरीत ढंगले चुम्बकीय तरंग प्रवाहित हुन्छ । ऊर्जा खुट्टाबाट प्रवेश गरेर टाउकोबाट निस्कन्छ । यसको साइडइफेक्टस्वरूप हामीलाई मानसिक एवं शारीरिक समस्या हुन्छ । यस्तो सुताइ अल्जाइमर वा मस्तिष्कसम्बन्धी समस्याका साथै उच्च रक्तचापको कारण बन्छ । त्यसैले दक्षिणतर्फ टाउको फर्काएर वा सिरानी बनाएर सुत्नुपर्छ ।
सिरानी कता बनाउने भन्ने कुरा पृथ्वीको चुम्बकीय अवस्थितिलाई आधार मानेर तय गरिएको हो । कुन दिशातर्फ सिरानी बनाउँदा सही हुन्छ र कुन दिशा गलत हुन्छ भन्ने कुरा यसैले निर्धारण गर्छ । पूर्वी दिशामा पनि सिरानी बनाएर सुत्न सकिन्छ । यसले पनि स्वास्थ्य एवं मानसिकतामा राम्रो प्रभाव पार्छ । जब कि सूर्योदय हुने स्थानतिर खुट्टा फर्काएर सुत्दा त्यसको प्रभाव प्रतिकूल देखा पर्छ अर्थात् पश्चिमतर्फ सिरानी पारेर सुत्नु राम्रो हुँदैन ।
शरीर विज्ञान पनि बुझौँ
हाम्रो मुटु शरीरको तल्लो आधा भागमा छैन, त्यो तीन चौथाइ माथिल्लो भागमा छ । यस्तो किन छ त ? किनभने गुरुत्वाकर्षणको कारण मुटुले रक्त प्रवाह गराउँदा शरीरको तल्लो भागभन्दा माथिल्लो भागमा बढी गाह्रो हुने गर्छ । त्यसैले मुटुभन्दा तलको भागमा रक्त प्रवाह हुने धमनीभन्दा मुटुबाट माथि रक्त प्रवाह गर्ने धमनी बढी परिष्कृत हुन्छ । माथिल्लो भागमा रगत प्रवाह गराउँदा त्यो अत्यन्तै सानो सिरामा हुन्छ, अर्थात कपालको रौं बराबर । त्यसमा अतिरिक्त रगतको बुँद थपियो भने, त्यो फुटेर रक्तश्राव हुनसक्छ ।
धेरैजसो मान्छेको मस्तिष्कमा रक्तश्राव हुन्छ । यसले खासै ठूलो हानि गरिरहेको हुँदैन, तर सामान्य असर भने गरिरहेकै हुन्छ । ३५ वर्षपछि मान्छेको स्मरणशक्ति वा ग्रहण गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुमा पनि यही कारण हुनसक्छ ।
हाम्रो शरीरमा रगतसँग जोडिएको एनीमिया वा रक्तअल्पताजस्ता कुनै समस्या छन् भने चिकित्सकले आइरन चक्की सेवन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र अर्थात् म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा धेरैलाई थाहा नै छ । पृथ्वीमा चुम्बकीय शक्ति शक्तिशाली हुन्छन् ।
हामी उत्तर दिशातर्फ टाउको बनाएर सुत्याैँ भने वा लगातार यस्तै अवस्थामा ६–७ घण्टा बितायौँ भने, चुम्बकीय आकर्षणको दबाव हाम्रो दिमागमा पर्छ । यसले टाउकाको रक्तप्रवाहमा पनि पूरै प्रभाव पार्छ । चुम्बकीय आकर्षणको कारण टाउकोमा बढी रक्तश्राव हुन्छ, त्यही कारण मानिस उत्तेजित भएर उठ्छ । अर्थात् निद्रा बीचमै भंग हुन्छ ।
यस किसिमको प्रभाव कति र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ व्यक्तिअनुसार फरक पर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ भने यसको असर बढी हुन्छ ।
वर्तमान समयमा विश्वमै अनिद्राको समस्या छ । धेरैको निद्रा खल्बलिएको छ । यसो हुनुमा मानिसको खराब जीवनशैली, दिनचर्या, खानपान, वातावरण एवं चिन्तन मूल कारण हो । हामीले हाम्रा पितापुर्खाले अभ्यास गर्दै आएका तौरतरिकाहरू पालना गरेको भए यस्तो समस्या नहुन सक्थ्यो ।
–शास्त्रले त राति सुत्नेबेलामा र विहान उठ्नेबित्तिकै पनि मन्त्रोच्चारण गर्ने सुझाउ दिएको छ । विहान उठेर जमिनमा गोडा टेक्नुअघि पृथ्वीसँग यसरी क्षमा माग्नू भनेको छ–
समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नीनमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ।।
–विज्ञानले भन्छ– जब बिहान उठिन्छ, दायाँतर्फ घुम्नुहोस् र विछ्यौनाबाट बाहिर आउनुहोस् । किनभने निद्राबाट उठ्नसाथ मेटाबोलिक प्रक्रिया एकदम सुस्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अचानक ओछ्यान छाड्दा मुटुमा दबाब पर्छ ।
–उठ्नसाथ हात दुवै हात आपसमा रगड्नुहोस् । यसले गर्दा शरीरका सबै नाडी सक्रिय हुन्छन् ।
–उठ्नासाथ मन्द मुस्कुराउने अभ्यास गर्नुपर्छ । किनभने हरेक बिहान हाम्रो निम्ति नयाँ जीवन हो ।
सुत्ने स्थान र सुताइ कस्तो हुनुपर्छ ?
सुत्ने ओछ्यान सही दिशामा सही ढंगले राखेको हुनुपर्छ ।
शयन कक्षा शान्त, खुला हावा आउजाउ गर्ने हुनुपर्छ ।
नियमित तालिका अनुसार सुत्ने र उठ्ने गर्नुपर्छ ।
सुत्नुअघि मनलाई शान्त बनाउनुपर्छ । व्यावहारिक कुराहरू मनमा खेलाउनु हुँदैन ।
राती चाँडै सुत्ने र बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाउनुपर्छ ।
कम्तीमा सात वा आठ घन्टा मस्तले निदाउनुपर्छ ।
चुम्बकीय तत्व, म्याग्नेटिक फिल्ड, योग, शरीर विज्ञान
Prevस्वीस, बेलायत र नर्वेले नेपाललाई दिए ११ अर्ब अनुदान सहयोग
काठमाडौं महानगरले सुरु गर्‍यो डेंगु नियन्त्रण अभियानNext